Ny famatrarana sary dia ilaina amin'ny fikarohana, finday ary fanatsarana ny fiovam-po. Martech Zone
Rehefa mamoaka ny sary farany ny mpamorona sary sy mpaka sary, dia mazàna izy ireo tsy nohamarinina hampihenana ny haben'ny rakitra. Ny famatrarana sary dia mety hampihena be ny haben'ny sary - na dia 90% aza - tsy mampihena ny kalitaon'ny maso mitanjaka. Ny fampihenana ny haben'ny sary dia mety hanana tombony vitsivitsy:
Fotoana haingana kokoa - Ny fametrahana pejy haingana kokoa dia fantatra fa manome traikefa ambonimbony kokoa ho an'ireo mpampiasa anao izay tsy hahasosotra azy ireo ary hirotsaka ela kokoa amin'ny tranokalanao.
Laharam-pikarohana Organika nohatsaraina - Tian'i Google ny tranokala haingana kokoa, ka arakaraka ny ahafahanao mamintina ny fotoana lanin'ny tranokalanao no tsara kokoa!
Niakatra ny tahan'ny fiovam-po - tranokala haingana kokoa manova tsara kokoa!
Fametrahana Inbox tsara kokoa - raha manome sary be dia be avy amin'ny tranokalanao amin'ny mailakao ianao dia mety hanosika anao mankany amin'ny fampirimana junk fa tsy ny boaty.
Na inona na inona mpanjifa, mametaka sy manatsara ny sarin'izy ireo foana aho ary mahita fanatsarana ny hafainganan'ny pejy, ny laharana, ny fotoana eo amin'ny tranokala ary ny tahan'ny fiovam-po. Tena iray amin'ireo fomba mora indrindra hitondrana fanatsarana ary manana tambiny lehibe amin'ny fampiasam-bola.
Ahoana ny fomba hanatsara ny fampiasana sary
Misy fomba maromaro hampiasana sary feno ny atiny.
Select sary mahafinaritra - be loatra ny olona manao ambanin-javatra ny fiantraikan'ny sary mahafinaritra hahafahany mamaky hafatra… na infographic (toa an'ity lahatsoratra ity), kisarisary, mitantara tantara sns.
hamintinana ireo ny sarinao - haingana kokoa izy ireo raha mitazona ny kalitaony (amporisihinay Kraken ary manana plugin WordPress lehibe izy)
Manatsara ny sarinao anarana fisie - Mampiasà teny fanalahidy azo faritana mifandraika amin'ilay sary ary ampiasao dash (fa tsy soritra ambany) eo anelanelan'ny teny.
Manatsara ny sarinao anaram-boninahitra - Ny lohateny dia nopetahany takelaka amin'ny navigateur maoderina ary fomba iray tsara hampidirana antso-to-hetsika.
Manatsara ny lahatsoratra mifandimby ny sarinao (alt text) - alt text dia novolavolaina hahazoana idirana, fa fomba iray hafa tsara hampidirana teny lakile mifandraika amin'ilay sary.
Link ny sarinao - Gaga aho amin'ny isan'ny olona miasa mafy mampiditra sary fa mamela rohy iray izay azo ampiasaina hitondrana olona fanampiny mankany amin'ny pejy fiantsonana na hetsika fiantsoana hafa.
Ampio lahatsoratra amin'ny sarinao - matetika ny olona no manintona sary iray, manome fotoana an'izany ampio lahatsoratra mifandraika na fiantsoana hiasa mba hitarika fifandraisana tsara kokoa.
Ampidiro ao amin'ny Sitemaps - manoro hevitra izahay Laharana SEO SEO raha ao amin'ny WordPress ianao.
mampiasa manaiky sary - sary miorina amin'ny vector sy fampiasana srcset mba hanehoana habe amin'ny sary marobe, nohatsaraina, dia handefa sary haingana kokoa mifototra amin'ny fitaovana tsirairay miorina amin'ny famahana ny efijery.
Ampidino avy amin'ny a fifandraisana an-tariby (CDN) - Ireo tranokala ireo dia hita ara-jeografia ary hanafaingana ny fandefasana ny sarinao amin'ireo mpitsidika mpitsidika anao.
Torolàlana fanatsarana sary an-tranonkala
Ity infographic feno avy amin'ny WebsiteBuilderExpert, Torolàlana fanatsarana sary an-tranonkala, mamakivaky ireo tombony rehetra azo amin'ny famatrarana sary sy fanatsarana - maninona izy no manakiana, mampiavaka ny endrika sary ary tsikelikely amin'ny fanatsarana sary.
Sehatra famatrarana sary Kraken
Raha mila fipoahana haingana amin'ny fotoana enta-mavesatry ny tranokalanao ianao dia aza mitady lavitra intsony Kraken, iray amin'ireo serivisy tsara indrindra amin'ny Internet! Efa nanandrana serivisy maimaimpoana izahay taloha - fa ny sary lehibe anananay dia matetika lehibe loatra noho ny haben'ny rakitra ho an'ny serivisin'izy ireo - izay karazana maharesy ny tanjona!
Kraken manana interface web feno, API matanjaka, ary - Soa ihany - Plugin WordPress! Ny plugin dia ahafahanao manatsara azy ho azy rehefa mampakatra ianao ary koa manatsara ny sary hafa izay efa napetraka teo aloha. Tena mahavariana ny valiny:
Ary, raha maso ivoho ianao, ny serivisy Kraken dia manolotra lakilen'ny API maromaro hahafahanao mampifandray mpanjifa maromaro amin'ilay serivisy
Midira ho an'i Kraken
Fanamarihana fotsiny, mampiasa ny anay izahay Rohy afovoany Kraken amin'ity lahatsoratra ity! Manantena aho fa handray anjara sy hijinja ny tombony azo.
Tags: alt tagsalt textcdnhafainganam-pandehan'ny tranonkala googlefamatrarana saryanaran'ny rakitraimage optimizationtorolàlana fanatsarana sarysary fanatsarana sarymanova habe ny sarysary sitemaplohateny saryalao sary an-tsainakrakenmanatsara sarypage speedsary mamalySEOseo fanatsarana saryshortpixelhafainganam-pandehan'ny tranonkalasrcsetpng kelytorolàlana fanatsarana ny tranokalawebsitebuilderexpertfamatrarana sary wordpresshaben'ny sary wordpressplugin WordPress wordpresswp mitsiky
E-Varotra voalohany amin'ny mpanjifa: Vahaolana tsara ho an'ny zavatra iray tsy azonao atao ny diso